Company Profile - Honghui Daily Appliance Co., Ltd
Fanasan-damba DETERGENT taratasy
Fanasan-damba DETERGENT Capsules
O Ora ekipa
Guangzhou HONGHUI ISAN'ANDRO TECHNOLOGY CO., LTD dia matihanina mpanamboatra sy ny mpanondrana ny 20 taona, tafiditra ao amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny varotra sy ny fanompoana ao am-bava fikarakarana, hoditra sy ny volo fikarakarana fikarakarana ny vokatra. GMP, FDA, taona, SASO no ankasitrahana. HONGHUI manana matihanina R & D ekipa sy QC ekipa izay manome toky toetra sy Ankehitriny-fivarotana fanompoana. Manana ny marika manokana, toy ny hoe: House velona, ​​fa Mamirapiratra Kosa ny, Sea onja, Fantadent, sns Dentifresh mivarotra tsara izy ireo tany Amerika, Amerika Latina, Eoropa, Arabia Saodita, Malezia, Aostralia ect. Isan-taona, dia tandremo ny Canton tsara tarehy, tsara tarehy Dubai Hong Kong ect tsara tarehy, ka aoka isika hihaona ao.
O Ora tantara
HONGHUI tongasoa OEM sy ODM baiko. Manana traikefa hanatsarana ny hanolotra asa fanompoana marika manokana, ary izahay dia miara-miasa amin'ny fivarotana lehibe sy ny didy ny governemanta. Indro manana injeniera matihanina sy ny mpamorona mijanona eto anilan'ny ho anao!
HONGHUI orinasa kolontsaina:
Sarobidy dia "ny olona mirona, centric mpanjifa. "
Team fanahy" andraikitra, anjara, fitomboana, fanavaozana. "
Mission dia" Manatsara ny fiainan'ny olona, mamorona ny mazava ny fahasalamana sy izao tontolo izao. "Aoka ny tanan'i an-tanana mba hamoronana izao tontolo izao ny hatsaran-tarehy!
Guangzhou HONGHUI ISAN'ANDRO TECHNOLOGY CO., LTD
Human fitomboana hormonina (HGH): miadana ve izany ...
Fitomboana hormonina solika mbola kely manampy foana fivoarana sy ny sela sy taova mandritra ny fiainana. Izany dia midika hoe novokarin'ny ny pea-salantsalany pituitary fihary - hita teo am-pototry ny atidoha. Nanomboka tamin'ny taona afovoany, na izany aza, t ...